I-Lithuania ne-Kazakhstan ziya kuphehlelela inkonzo yomoya yabakhweli ngqo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » I-Lithuania ne-Kazakhstan ziya kuphehlelela inkonzo yomoya yabakhweli ngqo
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseKazakhstan • Iindaba zaseLithuania zokuBika • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
I-Lithuania ne-Kazakhstan ziya kuphehlelela inkonzo yomoya yabakhweli ngqo.
Isigqibo sokugqibela malunga nokuhamba ngenqwelomoya rhoqo siyakwenziwa emva kokuba bobabini abasemagunyeni benikwe isaziso sokuhamba ngenqwelomoya ziikomishini ezizodwa ezibeka iliso kwimeko ye-COVID-19 kuwo omabini la mazwe.
I-Nur-Sultan eya eVilnius kunye neAlmaty eya eVilnius ngenqwelomoya ngenqwelomoya.
I-Wizz Air yaseHungary iya kuqhuba iinqwelomoya ezihleliweyo phakathi kweKazakhstan neLithuania.
Amagosa eenqwelo moya zaseKazakhstan kunye neLithuania atyikitye iProtocol yeNjongo yokwenza iinqwelomoya rhoqo.
Ngokwenkonzo yoonondaba ye-Ofisi yoMphathiswa Wezamashishini kunye noPhuhliso lweZakhiwo kwiRiphabhlikhi yaseKazakhstan, iinqwelomoya eziya ngqo ebantwini ziya kuphehlelelwa phakathi kweKazakhstan neLithuania kwiinyanga ezimbalwa.
I-Nur-Sultan-Vilnius kunye neAlmaty-Vilnius yeenqwelo moya ezicwangcisiweyo kulindeleke ukuba ziqale ekuqaleni kowama-2022.
IKomiti yezoPhapho yaseKazakhstan kunye nabameli beLithuanian Civil Aviation babambe iingxoxo kwikomkhulu laseKazakh, iNur-Sultan, namhlanje ukuxoxa ngokusungulwa kweenqwelomoya ezimbini eziqhelekileyo.
Kwavunyelwana ukuba yeyaseHungary Wizz Air ziya kuqhuba ezo moya.
Ngokutsho Icandelo loMphathiswa Wezamashishini Nophuhliso Lwezixhobo inkonzo yoshicilelo, iinqwelomoya ziya kumilisela okwethutyana kwikota yokuqala ka-2022.
Njengengxenye yeengxoxo, amagosa e-Lithuanian kunye ne-Kazakh aviation axoxa ngemiba yentsebenziswano kwicandelo lezothutho lomoya kwaye batshintshisa ngeProtocol yeNjongo esayiniweyo yokwenza iindiza eziqhelekileyo.